नेरुडे लघुवित्तको हकप्रद बैशाख १७ गतेसम्म खुला रहने, तपाईँले भर्नुभयो ?
ARCHIVE, CORPORATE » नेरुडे लघुवित्तको हकप्रद बैशाख १७ गतेसम्म खुला रहने, तपाईँले भर्नुभयो ?
नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले ५० प्रतिशत अर्थात दुई बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरिरहेको छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा नौ करोड रुपैयाँ बराबरको नौ लाख कित्ता हकप्रद सेयर चैत्र १४ गतेदेखि निष्काशन गरेको हो ।
वैशाख १७ गतेसम्म निष्काशन खुला रहने कम्पनीको हकप्रद सेयरको निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकको जिम्मा एनसिएम मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडले पाएको छ । नेरुडे लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगर, मोरङ र एनसिएम मर्चेण्ट बैङ्किङ लिमिटेड कमलपोखरीबाट उक्त हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन पाइनेछ ।
हाल नेरुडे लघुवित्तको चुक्तापुँजी १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेपछि लघुवित्तको चुक्तापुँजी २७ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
प्रकाशित : Wednesday, March 29, 2017